ए छोरी पो ? जितिनस तैले ? – Blogs, Books, Articles
March 24, 2019 Tulasi Acharya Articles, NEPALI One comment
आमा बन्नु हर नारीको सपना । भनिन्छ एउटी नारी तब मात्र पूर्ण नारी हुन्छे जब उ आमा बन्छे । यस्ता भनाई सानैबाट विभिन्न पत्रपत्रिका तथा कार्यक्रमहरुमा सुन्दै आएको भएपनि आफूले नै अनुभूत नगरेसम्म यसको साँचो अर्थ पहिल्याउन मलाई भने ग्राहो नै भयो । आफनो करियर र पढाईलाई पुरा गर्दे ढिला नै विहे गरे मैले । विहे गरेको दुई बर्षमा बच्चा पनि भयो । मैले परीजस्तै सुन्दर छोरी पाए । अनि मात्रै पहिलेबाट सुन्दै आएको एउटी नारी सन्तानप्राप्ती पछि मात्र पूर्ण हुन्छे भन्ने भनाई आफैले अनुभुत गरे । साँच्चै अहिले आमा बन्नु भाग्य हैन, अहोभाग्यको कुरा लाग्छ मलाई ।
छोरी भएको केहि महिनापछी म माइत पोखरा आए । सबै इष्टमित्र, साथीभाई भेट्न आउनुभयो । बधाई र शुभकामनको ओइरो नै लाग्यो । मलाई भेट्न आउने हुलमा अलिक टाढाकी, नाताले फुपु पर्ने दिदि भेट्न आउनुभयो । ढोकैबाट “ओइ के पाइस ?” भन्दै आउनुभयो । मैले “छोरी पाए नि दिदि” भने । “कठै छोरी पो ? जितिनस तैले” यस्तो भन्दै दिदि सुस्केरा हाल्दै सोफामा बसिन् । मलाई अचम्म लाग्यो । हुन त उ जमानाकी दिदि हुन्,उमेरले ७० लाग्न लागेकी आफुले जे जान्यो त्यही भनिन् भन्ने लाग्यो । मैले पनि हँस्यौली पारामा सोधे, ‘दिदि मैले हारे त ?” दिदिले भनिन् “हारिस नि ? छोरा भएको भए जित्ने थिइस, यो समाजमा छोरी हुनेलाई हेला गर्छन् , छोरा हुनेको छ्ट्टै महत्व हुन्छ, त्यसै मैले पाँच छोरी मुनी छोरा पाएको हुँ त ? । छोरी हुँदा आफुले पाएको दुःख कष्टहरु विस्तारै फुकाइन फुपुले । छोरा पाउने आशमा पाँच छोरी जन्माएकी फुपु उ बेला सासु,ससुरा र समाजले गरेका विभेदहरुको कहानी भन्न लागिन् ।
“धेरै दुःख पाए मैले, खाली छोरी पाउँछे भनेर मलाई सबैले हेला गर्थे, राम्रो सँग खाना पनि पाउन्नथिए । भुँडी ढल्काउँदै मेलापात, दाउरा घाँस गर्नुपथ्र्यो , प्रत्येक पटक मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्नुपर्थे , अरु त अरु आफनै खसम (श्रीमान) ले पनि माया गर्देनथे , तर जव छैटौ पटक छोरा पाए अनि घरमा मलाई गर्ने व्यवहार नै फरक भयो । सबैले ख्याल गर्न थाले । समाजले पनि छुट्टेै नजरले हे¥यो । पाँच छोरी पाउँदा अँध्यारोे भएको खसमको अनुहार छोरा पाउँदा खुसीले उज्यालो भयो । घरमा पालेको खसी काटियो ।”फुपुले भनिन् । विचरा फुपु आफुले जे भोगिन् त्यहि भनिन् । त्यसैले त मलाई भनिन् तैले छोरी पाएर जितिनस ।
अनपढ, मेरी फुपुसँग धेरै तर्क गर्न उचित ठानिन बस मुस्कानसहित दिदिका कुरा सुनिरहे । यत्तिकैम दिदिको चोलीमा मोवाइल बज्यो फुपुले चोलीबाट मोवाइल झिकिन् अनि बोलिन् छोरी सँग । केहि समयपछि मैले सोधे “कसको फोन हो फुपु ? अनि मोवाइल पनि लिनुभएको रहेछ, दाइले किन्दिनुभएको हो ?”। के को दाईले हुन्थ्यो कान्छी छोरीले फोन गरेकी नि, यो मोवाइल जेठी छोरीले किन्दिएकी , दाईले के वास्ता गथ्र्यो , दिदिहरुले नै माया गर्छन् , आमा के खान मन लाग्छ भन है भन्छन् , मन लागेको खानेकुरा ल्याइदिन्छन् अनि कपडा पनि छोरीहरुले नै किन्दिन्छन्, यो साडी पनि माइलीले किन्दिएकी ? । आफुले लाएको फरिया देखाउँदै भनिन् । मैले भने “ त्यस्तो दुःख सहेर पाँच छोरीमुनी पाएको छोराले वास्ता गरेन है फुपु तिमिलाइ, अनि माया त सबै छोरीले नै बढी गरेका रहेछन् त अनि दिदि त्यसोभए तिमिले जित्यौँ त छोरा पाएर ? । दिदि अवाक हुदै खुकुरी चुरोटको सर्को लिदै बरण्डामा निस्किइन् । अनुत्तरित दिदिका अनुहारले धेरै कुरा भनिरहेको थियो । सायद त्यहि दुख कष्ट चुरोटको धुँवामा उडाउन उनी लागिन् बरण्डातिर ।
म भने एकछिन सोचमग्न भए । अहिले पनि हाम्रो समाज कहाँ परिवर्तन भएको छ र ? जीवनका ७० बर्षसम्म थुप्रै उचारचढाव भोगेर उत्तराद्र्धमा पुगेकी मेरी फुुपुले भोगेको समस्या र अहिले अन्य महिला जसले छोरी पाउँछन् उनीहरुले भोग्ने समस्यामा समानता नभएपनि केहि न केहि रुपमा समानता भने आज पनि पाइन्छ हाम्रो समाजमा । छोरा हुने वित्तिकै हर्षले छाती फुलाउनेहरु छोरी भएको थाहा पाएर नाक खुम्चाउने पनि छन् । सन्तान त सन्तान नै हुन् । के छोरा के छोरी जे पाउँदा पनि त्यो आमाले भोग्ने पिडा एउटै हुन्छ, उनिहरु एउटै प्रक्रियाबाट जन्मिन्छन् । छोरी पाउँदा कम दुःख हुने र छोरा पाउँदा धेरै दुःख कहाँ हुन्छ र ? तर पनि हाम्रो समाज छोरी जन्मेकोमा पिडाबोध गर्छ । म त भन्छु छोरा पाउनु भाग्य हो भने छोरी पाउनु सौभाग्य । जुन घरमा छोरी छैनन् त्यो घर हरेक चाडवाडमा सधै उराठलाग्दो नै हुन्छ । दिदिबैनी भएको घरको रौनक छुट्टै हुन्छ । तिज,तिहार जस्ता चाडवाडमा कति उज्यालो हुन्छ चेलीबेटी भान्जाभान्जीले घर । छोरा पाउनेले सँसार जित्ने र छोरी पाउनेले हार्ने भन्ने फुपुका कुरालाई एकैछिन गमे । यत्तिकैमा सुतीरहेकी मेरी छोरी उठी ,उसलाई हेरे मलाई भने संसारै जितेझै भयो ,मायाले आलिँगन गरे अनि लागे मेरी छोरी स्याहार्न ।
birth of daughterconservative societyfiction-non-fictiongender discriminationNepali societysex and gender
Previous Post: “फ्रेन्डशिप”
Next Post: म बाँकी जिन्दगी कसरि बिताउन चाहन्छु?
Do you really believe in what the author has opined in this article?